Izindaba mayelana nendlela hhayi ukuzwana, futhi ngezinye izikhathi ngisho amahlazo toscha nendodana, kukhona ezisunguliwe yangempela futhi losers nomona. Okuningi ngokuvamile phakathi zyatyami toschami futhi zifakwe uma hhayi mnene, kuba nobudlelwane banobungane kakhulu. Futhi uma unina nomalokazana nendodana esifanayo abe namancoko bese ubuka zokuxhumana zabo phezu ingxenye - nemnandi! Kuyajabulisa ikakhulukazi ukuzwa siyakuhalalisela oluhle lokuzalwa umama wakwakhe kusuka.
Yiqiniso, kahle, uma umyeni indodakazi ingabhala izinkondlo zabo siqu intombazane lokuzalwa. Kodwa kungenzeka ukusizakala la futhi.
Izilokotho zosuku lokuzalwa lwebele
Toschenka, othandekayo, abathandwa zonke,
Ngathi manje, hhayi jest:
Ake ukuphila kwakho igcinwe yi Nkulunkulu!
Wonke umuntu uthanda crazy wena
Ugogo ezinhle, umeluleki engcono,
Ohlakaniphile uyaqonda umngane wethu!
Ngisho noma ngezinye izikhathi wena - isithunywa ecophelelayo
Lokho umshushisi uba kungazelelwe ...
Kanjani ngiyakuthanda devotedly,
Kodwa ngangingaqiniseki lucky nge nomama e.
Futhi ngakho mina ngethemba ukuthi umqondo impendulo,
Ngivumele wamsingatha ngokushesha!
Izilokotho zosuku lokuzalwa kuninazala - lena ngokuyinhloko siyabonga yokuthi lona wesifazane wamupha yiNdodana enjabulweni yomshado, wabeletha wenyusa umkakhe. Ngezinye izikhathi ugogo abayikhathalelayo, kanye namuhla kusiza "abasebasha" ngokuqondile ekufundiseni izingane zawo - abazukulu bakhe ozithandayo.
Izilokotho zosuku lokuzalwa lwebele - Umama abathandekayo unkosikazi omncane
Ngihalalisela wena ngokusuka enhliziyweni!
Engimangayo izandla zakho!
Ngiyajabula ukukwazi kahle kakhulu
Kids - abazukulu bakho.
Umkami nendodakazi yakho -
Isipho esihle kimi.
Ngiyabonga! Wena - injabulo yethu!
Futhi jabula kuba!
Phila eside, iminyaka engamakhulu amabili,
Yiba enempilo, bejabule,
Beautiful njengoba isixha sezimbali,
Futhi ake iphupho abe nesibindi!
Yiqiniso, kwamukelekile ukwethula umama lokuzalwa imikhonzo kanye temibhalo yephrozi. Kodwa kulokhu kungafiseleka ukuthi wayenothando, mhlawumbe kancane kuyindida (maqondana uqobo, of course!) Futhi yasekuqaleni. Ngokwesibonelo:
"Sweetheart toscha! Mina zashaya ukuhalalisela nawe ngosuku emangalisayo! Namuhla kwethu kinina nokuthi naphendukela wonke ... - okwamanje udinga twirl iposikhadi esandleni uma idijithi wesibili e kungcono lincane kuqala, kufanele kube, njengoba ayedidekile ufunde izinombolo "nasemuva", isibonelo, 64 ukufunda njengendlela 46, 52 - kokubili 25 futhi njll, - engu-35! Kodwa bheka wena, njengoba ngaso sonke isikhathi, kakhulu kunaye - ngaleyo ndlela iminyaka ... 34 nengxenye.
Ngakho-ke, ngifisa ukuba uphile eyikhulu namashumi! Ngakho, kukhona namanje ... okungenani 65. Futhi ingxenye yethu sizokwenza konke ukuqinisekisa ukuthi kule minyaka kuye kwaba elimangalisayo kunazo zonke, esimnandi kakhulu! Ngokuvamile, kakhulu, kakhulu, "
Ngokuyinhloko siyakuhalalisela oluhle lokuzalwa kumama liphinyiselwe ngesimo ubhontshisi. Ngokwesibonelo, kanje:
Isexwayiso! Ubani uyokhuluma umalokazana.
Ngiyabuza ngiphakamisela zonke izibuko yami!
Amavesi ukunikezela intokazi enhle -
, Unina eziyigugu ethandekayo!
Igazi nonnative silivumela,
Kodwa ezingavamile empilweni bomdabu.
Wawanika isiyalo esithambile - emsebenzini, musa alinge kokukhononda ...
A udumo - ngomumo phansi mina fly!
Ngifisa ukuthi umama owake waphila,
kaningi Siye eside.
ophaya okunjalo - kuzowabela imfihlo -
Ayikho enye indawo ngeke ukuthole, zungeza yonke iplanethi!
Oh futhi pancake kanye!
Uzizwa ngokushesha - abhake ngokusuka enhliziyweni.
Scarves, izigqoko, amasokisi namagilavu
Yena knits sonke ukuze.
Uhlale wazi lapho konke.
Futhi ungalokothi, wake ukhalele!
Umama lokhu akunakwenzeka ukuba bathande!
Ngifisela ukuphila isikhathi eside ngenjabulo!
Futhi iholide ngobuqotho kakhulu futhi kumnandi kuvela, uma umalokazana futhi indodakazi nabazukulu, nabangane ukulungiselela kusengaphambili othandekayo kuyiholide wangempela - ne ekhonsathini izinombolo, nge Emncintiswaneni ezithakazelisayo, ilotho. By the way, usengakwazi ukulungiselela kanye wentokozo odongeni iphephandaba.
Ezinhle iphephandaba ukuskena izithombe ezicacile iningi intombazane lokuzalwa futhi unamathele kubo ngokunikeza amasignisha ezithakazelisayo yasekuqaleni. Ungangena ngemvume izithombe njengoba evesini futhi temibhalo yephrozi.
Into ebaluleke kakhulu kunoma iyiphi congratulation - kuyinto ngobuqotho. Uma phakathi umama wakwakhe, futhi uye wazakhela ubuhlobo bangempela nokuqonda mutual nokubusa, bese ukhetha uhlobo futhi emazwini aqotho siyakuhalalisela emiphongolweni.
Yini usuku Day obheke? Sifunda!
Izipho for wedding yokugubha usuku? Abazali uyojabula ukunakwa kwakho
Ama-aviators "ama-aviators": umlando we-brand brand
"Iliad" - inkondlo elalinikezelwe ngonyaka odlule yaseTroy neMpi
Ekonomitel negesi negesi wokuhambisa: nokubuyekeza amakhasimende. Umgomo we operation zedivayisi
Indaba efingqiwe: "Mfowethu, eziyisikhombisa" - incwadi mayelana umusa, ukwethembeka, ubungani
Yini ubuchwepheshe bayindlala eminyakeni 5? umsebenzi Popular esikhathini esizayo